Adoo 25 jir ah milkiile shirkadeed sideed ku noqon kartaa? - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, Young entrepreneurs
Dhalinyaro shaqa abuurka ay sameeyeen guul ka gaaray
Balse ntiijada ka soo baxday tirakoob dhalinyarada shaqa abuurka sameeysay lagu sameeyey ayaa waxay tilmameysaa tirada dadka ugu badan oo ay da'dooda u dhaxeysa 16-24 jir iney door bidayaan iney iyaga iisu shaqeeyaan oo ay wax u gaar ah sameeysataan tirdaasi oo laba jibbaarantay wixii ka dambeeyey 2001-da.
Sanadkii 2016-kii 181,000 oo dhalinyaro da'daasi ah ayaa lagu tilmaamay iney yihiin kuwa naftooda iisu shaqaaleeyey.
Balse runta meesha talla ee aan laga been sheegi karin ayaa waxay tahay dad aad u badan iney ku guul darreystaan wixi ay sameeyeen seddex meelood dadkaasi shaqooyinka abuurtay ganacsigooda seddex sano ma gaarin oo waa uu baaba'ay, sida ay sheegtay daraasad ay amuurtan ka sameeysay xaruunta cilmaadhista shirkadaha yaryar.
Laga soo billaabo kuwa allifa barnaamijyada komputerrada ilaa iyo kuwa rootiga duba Newsbeat waxy dhalinyarada da'da yar ee shaqooyinka abuurtay ay weydiisay waxyaabaha ku dhiirriyey iney hal abuur ganacsi ku dhaqaaqaan.
'Arrinta ugu muhiimsan ayaa waxay tahay ku dhaqaaq waxa aad sameyn rabtid'
Wuxuuna Newsbeat uu u sheegay "in shaqooyin badan oo uu dalbaday loo diiday, marwalba wuxuu aaminsanaa inuu wax weyn qaban karo, wax weyn inuu iskii u qaban karana wuu ogaa.
Adam wuxuu soo bandhigay fikirkiisa gancsi wuxuuna ku guuleystay abaalmarinta sanadka dadka gancsiga abuurta la siiyo wuxuuna helay £5,000 oo gini iyo inuu jaamacadda uu lacag la'aan uu kaga barto cilmiga gancsiga.
Adam wuxuu leeyahay "haddii aad leedahay fikir cusub iyo hami wada socdo arrinta ugu wanaagsan waa iney ahaataa inaad ku dhaqaaqdo oo aad ka labalbeyn"
"Haddii aad dooneyso inaad wax baratidna, wakhti ha iska lumin orod oo baro sababta oo ah waxaa nagu hareereysan dad badan oo wanaaggeenna jecel" ayuu leeyahay.
Ilaa iyo 2012-ka dhalinyarda shaqa abuurka sameeyey oo ay da'doodu u dhaxeyso 18-24 jir waxaa la amaahiyey £54 milyan oo gini.
Vittoria Capaldi, waa gabar 20 jir ah marki ay ganacsigeeda yar billaabeysay "dowladda iney wax ka amaahato iskuma dayin" bangi ama cid kale oo wax amaahiso uma tagin".
Waxayna sheegeysaa "iney dadka xiriirka tooska ah la leh shaqada aad qabaneysid aad amaah ka qaadato ay wanaagsan tahay maadaamaa ay qorshahaaga ganacsi ay iyagu si fudud u fahmayaan."
Sida oo kalana waxaa jira hay'ado dowli ah oo taageero dhinacya badan oo ay la talinta ka mid tahay dhalinyarada da'da yar ee hal abuurka sameeya.
Shabakaddan ayaa waxaa hoos taga in ka badan 180 shirkadood oo ganacsiga dhinaca teknoolojiyadaha casriga ah shirkadahaasi shabakadda hoos tago oo ay ka mid yihiin Tata, Barclays, iwm...
Ashleigh Plummer, hal abuur ganacsi oo sameeyey barnamij Kombiyuutar dhinaca ciyaaraha ah
Ashleigh wuxuu leeyahay "waxaa aniga halkan i soo gaarsiiyey Shabakadda Gymshark maadaamaa aan jeclaa inaan la shaqeeyo."
Xigashada Sawirka, Gymshark
Dhalinyaro lagu ciqaabay heesta Kiki
Akshay waa 20 jir wuxuuna maamulaa lacag dhan £18 milyan oo gini
Akshey wuxuu leeyahay macamiisha iyo shaqaalahaba waxay jecel yihiin iney shirkadda dhaqaale ku darsadaan madamaa ay shirkadda aaminsan yihiin iney faa'ido u keeneyso.
Wuxuuna intaa ku daray "iney dadku diyaar u yihiin iney isbeddelka socda qayb ka noqdaan"